Zanakavavin’i Betoela, zanakalahin’i Milka, izay naterany tamin’i Nahora, aho. Satria efa nampahafantarin’Andriamanitra anao izany rehetra izany, dia tsy misy lehilahy manan-tsaina sady hendry tahaka anao; 40 koa ianao no hanapaka ny ato an-tranoko, ary araka ny teninao no hitondrana ny oloko rehetra; ny seza fiandrianana ihany no hahalehibe ahy noho ianao. Indro, efa nampiditra lehilahy Hebreo tato amintsika hisangy antsika izy; nanatona ahy mba handry amiko iny, dia niantso tamin’ny feo mahery aho; 15 ary nony reny fa nanandratra ny feoko aho ka niantso, dia navelany teto anilako ny akanjony, ary nandositra iny ka lasa any ala-trano. Tsy mba hanozona ny tany intsony noho ny amin’ny olona Aho; fa ny fisainan’ny fon’ny olona dia ratsy hatramin’ny fahazazany; ary tsy mba handringana ny velona rehetra intsony Aho tahaka izay nataoko. Fa hoy kosa ravehivavy: Efa nahafa-tondromaso ahy Andriamanitra.
Ary izany nofiny sy teniny izany biaboly vao mainka nankahalany azy. Ny taranakao no homeko ity tany ity, dia Izy no haniraka Ilay Anjeliny eo alohanao, ka any no hakanao vady ho an’ny zanako. Aza hihinanareo na tendrenareo izany, fandrao maty ianareo. Jereo ange ny lanitra, ka isao ny kintana, raha mahisa azy ianao. Asa; moa mpitandrina ny rahalahiko va aho? Ry Jakoba; dia hoy izaho: Ary Josefa namoha ny trano fitehirizam-bary ka nivaro-bary tamin’ny Egyptiana.
Tsia, tompokolahy; fa tonga mba hividy hanina ny mpanomponao. Jehovah anie mbola hanampy zazalahy iray ho ahy koa. Chapitre 19 1 [Ny nandravan’Andriamanitra an’i Sodoma sy Gomora, sy ny namonjeny an’i Lota] Dia nankany Sodoma ilay anjely roa nony hariva, raha Lota nipetraka teo am-bavahadin’i Sodoma; ary raha nahita azy Lota, dia nitsangana malagays hitsena azy izy ka niankohoka tamin’ny tany. Misia fahazavana eny amin’ny habakabaky ny lanitra hampisaraka ny andro sy ny alina; ary aoka ho famantarana sy ho fotoana ary ho andro sy taona ireo.
Dia niala teo anatrehan’i Makagasy Josefa ka nandeha nitety ny tany Egypta rehetra. Jehovah Tompo ô, ahoana no hahafantarako fa handova ity aho?
Ny taranakao no homeko ity tany ity, dia Izy no haniraka Ilay Anjeliny eo alohanao, ka any malagsy hakanao vady ho an’ny zanako. Ankehitriny izao dia hikambana amiko ny vadiko, fa efa niteraka zazalahy telo ho azy aho; izany no nanaovana ny anarany hoe Levy.
Angamba tsy hety hiaraka amiko ny vehivavy. Dia halainao koa va ny dodaiman’ny zanako? Omeo ahy ny olona, fa ny fananana ento ihany ho anao. Indro, ho baibo,y ihany aho; ka mahasoa inona izay fizokiana?
Moa ho avy tokoa va aho sy ny reninao ary ny rahalahinao ka hiankohoka amin’ny tany eo anatrehanao? Ary ny Kananita no tompon-tany tany Kanana fahizay. Ilay voalazako taminareo ihany hoe: Dia nomen’i Abrama azy ny ampahafolon’ny zavatra rehetra.
Tsy avy amin’Andriamanitra va ny filazana ny hevitry ny nofy? Angamba halainao an-keriny amiko ny zanakao-vavy. Indro, efa nekeko koa ianao tamin’izany zavatra izany, ka tsy horavako io vohitra nolazainao io.
Ary nipetraka tandrifiny izy, dia nanandratra ny feony nitomany. Tamin’ny andro namoronan’Andriamanitra ny olona dia tahaka ny tarehin’Andriamanitra no nanaovany azy; 2 lahy sy vavy no namoronany azy; dia nitahy azy Izy ka nanao ny anarany hoe Adama tamin’ny andro namoronany azy.
Pcf 15 1 [Ny nanaovan’Andriamanitra fanekena tamin’i Abrama] Rehefa afaka izany, dia tonga tamin’i Abrama ny tenin’i Jehovah tamin’ny fahitana ka nanao hoe: Indro, Jakoba mpanomponao ao aorianay ao.
Moa zavatra kely va ny nakanao ny vadiko? Hatao inona ireo ondrivavy kely fito natokanao ireo? Tsy ao ny zaza, ary izaho, aiza no halehako? Enga anie ka Isimaela no ho velona eo anatrehanao! Nanonofy izahay, ka tsy misy mahalaza ny heviny. Avelao Aho handeha, fa efa mazavaratsy ny andro. Pcf anomezo ahy hohaniko ny mena, dia io mena io, fa reraka aho izany no nanaovana ny anarany hoe Edoma.
Tsy mba handringana Aho noho ny folo. Asa; moa mpitandrina ny rahalahiko baibo,y aho? Ny zaza izay nomen’Andriamanitra ny mpanomponao noho ny fahasoavany. Efa antitra izao raintsika, ary tsy misy lehilahy ambonin’ny tany hanambady antsika araka ny fanaon’ny tany rehetra; 32 andeha hampisotrointsika divay ny raintsika dia handry aminy isika hananantsika fara avy amin’ny raintsika. Faingana, makà koba tsara toto intelon’ny famarana; dia fetafetao ka ataovy mofo.